IINDIDI ZEPATIOS (IIMBONO EZILUNGILEYO ZOYILO) - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi Iindidi zePatios (Iimbono eziLungileyo zoyilo)
Iindidi zePatios (Iimbono eziLungileyo zoyilo)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu ebonisa ezona ntlobo zidumileyo zeepatios kubandakanya ubuchule kunye neengozi kunye nemibono yoyilo.
Ipatio inokuba lulongezo oluhle nakweyiphi na indawo yangasemva kwaye inokuba yindawo entle yokuphumla nabahlobo kunye nosapho. Indlu yakho yahlukile, kwaye-njengendlu yakho, ipatio yakho kufuneka ibonakalise isitayile sakho. Ngethamsanqa, unokukhetha okuninzi xa kufikwa kuyilo lwepatio. Ngaphambi kokuba wenze ukhetho lwakho, makhe sijonge ngokusondeleyo kwezinye zezinto onokukhetha kuzo.
Uhlobo lweeKhonkrithi ezigqityiweyo zePatios
Iiparaver zePaver lukhetho olusezantsi kakhulu xa kuziwa kwimathiriyeli yepatio. Nangona kunjalo, iza ngexabiso eliphezulu. Ngokwesiqhelo, uya kubhatala malunga ne- $ 12 ukuya kwi-22 yeenyawo ngonyawo wesikwere. Unokuzisa indleko ezantsi ukuya kuthi ga kwi-2 ukuya kwi-8 yeedola ngonyawo wesikwere.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba ukufakwa kweepavini zeepavini kukude kakhulu kunezinye iindlela. Uqikelelo oluninzi lubeka ixesha lokufaka kwiintsuku ezi-3 ukuya kwezi-5 zeqela elinobuchule ukuba lifake ipatio yokuhamba.
Inxalenye enkulu yoku yile nyani yokuba iipatiyidi zeeparaver zithatha umsebenzi omninzi wokulungiselela ngaphambi kokuba izinto zibekwe phantsi. Inyathelo lokuqala kukususa nabuphi na ubumdaka okanye ingca ukuya kwinqanaba lomhlaba ongaphantsi. Kwezinye iindawo, oku kunzulu njengeenyawo nesiqingatha.
Emva koko, igrabile kufuneka yongezwa emva koko ilungelelaniswe. Emva koko, malunga nesanti yokulala yesanti kufuneka ifakwe kwaye emva koko ungazifaka iipavili ngokwazo. Nje ukuba iipali zibekwe, i-PVC okanye i-edging yesinyithi kufuneka isetyenziswe ngamanqwanqwa emiphetho ukuze isetyenziswe kumlinganiso wobude beenyawo zonke.
Nje ukuba iipali zibekwe, uya kufuna ukusebenzisa umtshayelo ukucoca isanti kwizikhewu eziphakathi kwabo. Uya kuthi emva koko ufune ukungcangcazela ezi ndawo. Ekugqibeleni, ipatio iya kufuna ukucocwa kwaye itywinwe. Unokwenza ipatio yakho ihlale ixesha elide ngakumbi ukuba usebenzisa itywina kwiipatios ezichaphazela imozulu.
Iipatios ezinento yokuhombisa zihlala zenziwe ngamatye enziwe ngekhonkrithi, izitena zodongwe, okanye ilitye lendalo. Ezi zihlala zifakwa njengekhonkrithi ngohlobo lwamaqhekeza amancinci kodwa ahlukeneyo anemibala eyahlukeneyo, iipateni kunye noburhabaxa. Siza kujonga nzulu kwezinye iintlobo zeepatie zekhonkrithi ekufuneka ukhethe kuzo kamva. Ngokungafaniyo nezinye iindlela zekhonkrithi, iipatiyidi zepavivile azidingi xesha lokuseta kwaye ukuba uhamba kuzo ngokukhawuleza awuyi kubangela monakalo.
Olunye udibaniso lweeparaos kukuba ukhula luthanda ukukhula ngalo. Abanye abantu bazama ukuyiphepha le nto ngokusebenzisa isanti yepolymer ukuthintela le ngxaki. Kuyenzeka ukuba uphinde wenze ipatio yokubamba ukuba iyaqhutywa ngokhula kwimeko yokuba izinto ziphuma ezandleni, nangona kunjalo.
Ukuphela kwinqaku elincomekayo, inzuzo enkulu yeepatios ze-paver kukuba azihambelani neengxaki ezinxulumene nemozulu. Abayi kuvumelana kwaye baqhekeke ngokulula njengolunye ukhetho ngexesha lokubandayo kunye neenyanga zasebusika.
Iipatio zezitena lukhetho lwakudala lweepatios kwaye zinokubhena ngokubanzi. Ukhetho lwendabuko lubomvu isitena kodwa zininzi ezinye iindlela zokhetho ezinje ngombala omnyama, omnyama, itan, cream, ngwevu, buff kunye nepinki.
Iingubo zeentyatyambo zasehlotyeni zemitshato
Izitena ezisetyenziselwa iipatios azifani nezitena zokwakha onokuzibona ezindongeni, nangona kunjalo. Ezi zitena zincinci kodwa zihlala zizinzileyo ngokwaneleyo ukuphatha abantu rhoqo basebenza kwi-patio yakho.
Ukuba ufuna ukuzifakela ngokwakho ezi zitena, uya kube uhlawula i $ 3 ukuya kwi-5 yeedola ngonyawo wesikwere. Kwelinye icala, ufakelo lobungcali, uyakuhlawula i $ 12 ukuya kwi-18 yeedola ngeenyawo zenyawo. Nangona kunjalo, uya kufuna ukugcina engqondweni ukuba ufaka ezi zitena ngokwakho, mhlawumbi uya kufuna isarha yezitena. Ukuba awunayo enye yezi ziya kubiza malunga ne-60 ukuya kwi-95 yeedola ukurenta enye.
Inxalenye yeendleko zokuhlawula kukuba ukubeka izitena esantini okanye kudaka. Ukubeka isanti akubizi kodwa izitena zinokutshintsha. Ngelixa iisetingi zodaka zibiza kakhulu, awuzukuba naxhala lokuba izitena zingalingani.
Olunye uhlobo loyilo lweepatios zezitena kukubekwa kwezitena. Oku kubandakanya iipateni ezinje;
● Iibhondi eziQhelekileyo,
● Ukubaleka kweBond,
● Ukudityaniswa kweStack / Running Bond,
● I-45-Degree iHeringbone,
● I-90-Degree iHeringbone,
● Ibhasikithi enye,
● Ibhasikithi ephindwe kabini, kwaye;
● Ibhokisi yebhaskethi yebhokisi
Icala elisezantsi kwiipatio zezitena azisabeli kakuhle kwimozulu ebandayo njengeparao yeparaver. Oku kuthetha ukuba unokuba nengxaki ngokuqhekeka kwezitena emva kwethutyana. Unokufumana imicimbi enje ngokhula kunye nengca ekhulayo - ngakumbi xa ujongene nesitena esisetiweyo.
Ngethamsanqa, izitena kulula ukuzigcina. Into ekufuneka uyenzile kukuhlamba amandla okanye usebenzise i-hydrogen peroxide okanye iviniga ukugcina ipatiyo yakho yezitena ijongeka ngathi intsha. Bona Okuninzi izimvo zepatio yezitena Apha.
Amatye eflegi afakwe ngohlobo lwee-slabs zamatye, zihlala zi-intshi ezi-1 ukuya kwezi-3. Ngokungafaniyo nepavile okanye iipatio zezitena esizijongileyo ukuza kuthi ga ngoku, ezi azisebenzisi uyilo oluqhelekileyo, oluphindaphindiweyo. Endaweni yoko, amatye eflegi eza ngobume obungaqhelekanga obuya kunika ipatio yakho ukubonakala kohlobo oluthile.
Ngokomndilili, ufakelo lobuchule lwe- ipatiyo yelitye Ixabisa malunga ne- $ 12 ukuya kwi-28 yeenyawo zenyawo nganye. Uninzi lwabanini bamakhaya bakhetha ukuba babe nengcali yokufaka ipatio yabo xa besebenzisa ilitye leflegi kuba ngokungafaniyo nenketho efana nezitena, kunzima ukubeka iziqwenga kunye. Ingcali inokwenza ukuba umsebenzi wenziwe ngokukhawuleza kwaye awuyi kufuna ukuba nexhala malunga nokushiyana okungalinganiyo. Ukuba ulungile kwaye ufuna ukwenza ufakelo ngokwakho, izinto ezizodwa zinokubiza malunga ne-3 ukuya kwi-10 leedola ngeenyawo zenyawo.
Xa ukhetha ilitye leflegi, zininzi izinto onokukhetha kuzo. Ngelixa ngokuqinisekileyo unokufumana phantse zonke ezi zinto zikhethiweyo kwi-intanethi, ukuba ukhetha into ethile ekuhlaleni, kunokwenzeka kakhulu ukuba ilingane ngaphandle komthungo kunye nokusingqongileyo kweyadi yakho.
Omnye umahluko xa kufikwa kumatye eeflegi nokuba usebenzisa amatye asicaba okanye angalinganiyo. Ngelixa amatye eflegi angalinganiyo enomtsalane wendalo, kukho ezinye iingxaki. Ngokuyintloko, kunokuba nzima kwabanye ukuhamba ngendlela engalinganiyo. Kwimeko apho ukhathazeke ngezinto ezinje ngezihlalo ezinamavili okanye abahambahambayo okanye umntu okhubekayo nje, unokufuna ukuqwalasela ukhetho olucwangcisiweyo.
Esinye sezibonelelo ezinkulu xa kuziwa iintlobo zeepatios zamatye kukuba izokuhlala ixesha elide. Ukugcina iiflegi zakho zihlala ixesha elide, abanye bacebisa ukuba ungazitywini. Ukutywina iflegi yelitye kunokuwohloka kwaye kuphume umbala ngokukhawuleza elangeni.
Kwisihloko selanga, kukho iingxaki ezithile kwimozulu yelitye leflegi. Xa ilanga ligqats 'ubhobhoyi kuyo, liza kushushu kamnandi ngaphantsi kweenyawo. Xa kunetha, ilitye lakho leflegi liya kuthi lityibilike ukuze uzulazule ngokunjalo. Oko bekutshiwo, ilitye leflegi liqhuba kakuhle nakweyiphi na imeko.
Ukugcinwa kwelitye lelitye kunokuba lula ngokunjalo. Ngokubanzi, konke okufuneka ukwenze rhoqo kukutshayela inkunkuma eya kuthi ichaphazele amatye okanye ibangele ukukhula kwesikhunta. Xa isikhunta sikhula, i-bleach inokuyinyamekela ngokukhawuleza kwaye iikhemikhali ezinzima zingasetyenziselwa ukurusa kunye negrisi. Unokubona kwakhona ukuba ilitye lakho leflegi kufuneka lilungiswe ukuba libekwe esantini. Iflegi ebekwe kwikhonkrithi ayinangxaki.
Iipatios zeGravel lolunye lwezona zigqibo zibiza kakhulu onokuzikhetha emva kwendlu. Eyona nto ixhaphakileyo isetyenzisiweyo kwiiparadise zegrabile yipevel ​​gravel. Ngokomndilili, umbandela wepatiyidi yamatye ertyisi ungabiza imali encinci njengeedola ezi-2 okanye ngaphantsi kunyawo lwesikwere. Ukugcina ipatio yakho yegrabile ijongeka intle, kuyakufuneka uthenge igrabile entsha rhoqo emva kweminyaka emi-3 ukuyigcina. Olunye ukhetho lwegrabile oluwela ngaphakathi kuluhlu lweendleko lubandakanya i-granite ebolileyo.
Nksk. Nditsho nks.
Ipevel ​​gravel inokwenziwa ngegranite, dolostone, limestone, okanye amanye amatye ngelixa i-granite ebolileyo, ewe, yenziwe ngegranite. Ezi zichotshoziweyo zibe ziincinci ezincinci. Kwezona zincinci zincinci, zinokulingana nobungakanani beesanti okanye zibe nkulu njenge-intshi ye-¼.
Eyona ngxaki inkulu ngeeparosisi zegrabile kukuba azinayo indawo efanayo njengezitena okanye iipavivos. Ngenxa yoku, iingxaki ezinje ngefenitshala yefenitshala eyehlela kwigravel iqhelekile. Ukukunceda ukunqanda oku, uyakufuna ukusebenzisa izinto zokuzinzisa kwipatiyo yakho. Nokuba ungazisebenzisi izinto ezizinzisayo ziya kuchaphazela iindleko zakho kodwa hayi kakhulu. Kwiipatio ezinokuqiniswa, uya kuba uhlawula malunga ne- $ 2 ngeenyawo zenyawo ngelixa uza kuhlawula kuphela malunga ne- $ 1.50 ukuba awusebenzisi izinto zokuzinzisa.
Into entle malunga neeparosisi zegrabile kukuba azizukutyibilika okanye zikhukula xa kunetha. Kungenxa yokuba ivumela imvula ukuba ihambe ngayo kwaye ingene ngqo emhlabeni. Le propati ikwanceda ukukhukuliseka komhlaba emva kwendlu. Ukongeza, oku kuthetha ukuba awunyanzelekanga ukuba ukhathazeke ngokufaka le nto kutyekelo njengoko ufuna ukwenza nezinye izinto ezinje nge paver.
Enye yezona zinto zinomtsalane malunga neepraos zegrabile ngaphandle kwexabiso zinokuba lula ukuba yiprojekthi ye-DIY. Xa ufaka ipatio yegrabile, uya kufuna ukuqinisekisa ukuba usebenzisa isithintelo somhlaba ukwahlula igrabile yepatio kumdaka ongaphantsi. Ukuba oku akwenziwanga, ipatio yakho iya kuba mbi kancinci kwaye ibe nobuninzi obunodaka kwimo yokuqala enethayo emva kofakelo.
Unokukhathazeka malunga nepatio yegrabile yekhephu. Emva kwayo yonke loo nto, ungayifola njani into evulekileyo ngakumbi? Ngekhephu elikhanyayo, unokusebenzisa nje igqabi legqabi. Oku kuyakuliphephetha ikhephu ngaphandle kokuphazamisa igrabile.
Ukujongana nekhephu elinzulu nelinoxinizelelo, zama ukwenza umhlakulo kangangoko unakho ngaphandle kokucaphukisa ukubekwa kwegrabile yakho. Emva koko, ungasebenzisa ityuwa ukunyibilika. Ukubeka ityuwa phantsi kukwayindlela enkulu yokukhusela ukuba uyazi ukuba kuza ikhephu.
Enye indlela enomtsalane kwigravel kukusetyenziswa kwamatye omlambo ukwenza indawo yokuhlala yepatio. Le ngasemva isebenzisa ilitye lomlambo elinetyhula yomlilo wamatye kunye namatye amakhulu njengeebhentshi ukwenza indawo yokuhlala ehlekisayo. Bona Okuninzi izimvo zegrabile zegrabile Apha.
Iipatios zamatye ezendalo zihle kwaye ziza kwiindidi ezahlukahlukeneyo ukuze ukhangeleke. Kukho iintlobo zesilayidi kwimibala ebomvu, eblowu, emnyama, ngwevu kunye nomdaka zikunika uninzi lwezinto onokukhetha kuzo xa kufikwa kumbala. Zikwavela kumvelisi njengeethayile ezisikwe koxande, okanye njengelitye elirhabaxa elimile ukukunceda ufumane uyilo olugqibeleleyo.
Ayisiyiyo kuphela iithayile zesilayidi ezibonakala zintle njengepatio yangasemva eyomeleleyo kwaye yenziwe nge-100% yamatye endalo. Ukongeza, iithayile zesileyiti zinokufakwa njengeprojekti ye-DIY, nangona kunokuba yinto enzima ukuyifaka.
Ngoku kwisilayidi esezantsi ifuna isondlo esincinci ukuze igcinwe ikhangeleka. Ingathathelwa ingqalelo ibize kakhulu xa ithelekiswa nezinye iindlela zomgangatho.
Ikhonkrithi lukhetho olunokuchaphazeleka kwipatio yakho kuba iza ngeendlela ezahlukeneyo zokugqiba kunye nemibala. Njengokuqikelelwa ngokubanzi, unokulindela ukuhlawula malunga ne- $ 6 ukuya kwi-12 yeedola ngeenyawo zekhonkrithi.
Iprojekti yokuqala yeepatio zekhonkrithi kukuba ihlala ihleli ngokumangalisayo. Ayitshintshi ngokwemozulu kwaye ekuhambeni kwexesha njengezinye iindlela kunye nokubuyisela kwakhona kungasetyenziswa ukwenza ikhonkrithi yomelele. Ngelishwa, imibala ekhonkrithi iyaphela elangeni ukuba idayiwe. Xa kuziwa ekonakaleni kwesakhiwo, unokubona ukuba kufuneka ulungise iintanda kunye nokuqhekeka.
Xa ezi ngxaki zolwakhiwo zivela, zinokuba yintlungu yokulungisa ngakumbi ukuba uzama ukudibanisa ikhonkrithi yokuhombisa. Kungaba yindleko ukuzilungisa kodwa ngaphandle koku, kulula ukuzilungisa. Into ephambili ekufuneka uyenzile ukuze uqiniseke ukuyenza rhoqo kukutshayela kwaye uyiphose phantsi.
Ubungakanani begaraji yemoto eyi-1.5
Kukho iinkxalabo ezimbalwa zokhuseleko xa kuziwa kwikhonkrithi. Eyona iphambili kukuba kunzima kakhulu kwaye iyatyibilika xa imanzi. Iichips kunye nokuqhekeka kwenza umngcipheko wokukhubeka kubi. Ngenxa yoku, amanye amakhaya anabantwana ahamba nolunye ukhetho. Nangona kunjalo, unokunciphisa indlela ikhonkrithi ecekeceke efumana ngayo ngokukhetha uyilo olunestampu.
Sitshilo ngaphambili ukuba ikhonkrithi iyaguquguquka kukhetho loyilo. Esona siseko sisicwecwe somgangatho wekhonkrithi, ogudileyo, ongenadayi. Oku kwenziwa ngetrowel. Umtshayelo ungasetyenziselwa ukwenza ukugqitywa okuncinci okuya kunceda ukuthintela indawo emtyibilizi xa imanzi.
Unokukhetha kwakhona ukuhlela ukuhlela ukongeza imiphetho ebunjiweyo. Obu buchule bunokusetyenziselwa ukwenza amalungu ngokudibanisa apho ikhonkrithi kulindeleke ukuba iqhekeke.
Ukugqitywa kokugqitywa kwamanqaku onke kusetyenziselwa ukunceda ukumelana nesiliphu. Olu luhlobo lokugqiba olubona kwiipavumente zesixeko kwaye kwenziwa ngokuhlamba umaleko ophezulu wekhonkrithi. Ukugqiba oku kugqiba, ezinye izinto ezinje ngelitye lekalika okanye i-quartz esetyenzisiweyo inokusetyenziswa. Ityuwa igqibezela apho ityiwa yelitye yalekwe phezu kwekonkile yenye indlela yokubonelela ngokumelana nesiliphu.
Ukugqitywa kwetyuwa yindlela esetyenziselwa ukongeza isitayile kwiipatio zekhonkrithi eziqhelekileyo. Ukuphumeza le khosi yetyuwa yetyuwa yongezwa kumphezulu wekhonkrithi emva koko yahlanjwa. Ityuwa yokugqiba ikhonkrithi isitayile esisetyenziswa rhoqo kumachibi.
Isitampu sekhonkrithi Sebenzisa uyilo olubunjiweyo ukulinganisa ezinye izinto ezinje ngezitena, isileyiti okanye ilitye lelitye. Inqweneleka kakhulu ngenxa yobuhle bayo, iindleko kunye nolondolozo olusezantsi.
Ikhonkrithi inokuba nayo imibala ngeendlela ezahlukeneyo. Imibala inokongezwa ngexesha lenkqubo yokuxuba kunye nebala lisetyenziswe ngaphambi kokuba kutywinwe ikhonkrithi. Ukutywina kuhlala kusetyenziswa i-asidi.
iilokhwe zomama womyeni ziyawa emtshatweni
ilokhwe yomtshato eblowu nemfusa
Izipho zeminyaka engama-17 zomtshato
liliphi iqela le lingerie